Naima Ali shared a post
Abdimajid Hussein To Maskaxmaale
Muuqaalka soo socda oo aad aan kaga hadli doono sidii aad youtube-ka lacag uga samayn kari lahayd adiga aan muuqaalo aad leedahay diyaarin ama aan kamarad, cod midna iska duubin.
Naima Ali added new product for sell.
China· In stock· Used
Waxaad naga helaysaa iPhones refurbished ah ama aan waxba la isticmaalahayn oo cusayb oo kale ah weliba qiimo qaban. Fadlan qiimaha saxda ah iyo faah faahinta nala soo xidhiidh. waxaanu kuugu keeni karnaa alaabta soomaaliya.
Naima Ali changed her profile picture
Quruxdii oo qof ah
You have poked NaimaAli